Seoul, i-South Korea
마포구, i-South Korea
Ukufika kubantu abangu- 8
Indlela yokupheka ukudla
Funda izindlela zokupheka zendabuko futhi uzwe izindaba ezizekwa ababungazi bendawo.
Yabelana ngokudla ezindaweni ezikhethekile, kusuka emapulazini angasese kuya ezindaweni ezisophahleni oluyimfihlo.
Konke okokuzithokozisa kuhlolelwe amasiko angokweqiniso obuciko kwezokupheka.
Xhumana no Junghee mayelana nanoma yikuphi okuthandwayo okudliwayo
Izinto ozithandayo ezidliwayo
Uma kuceliwe, umbungazi anganakekela izidingo ezilandelayo zezinhlobo zokudla. Kufanele wazise umbungazi ngaphambi kokokuzithokozisa uma ufuna indawo yokuhlala.
Ukungezwani komzimba nekinati lesihlahla
Ayixutshanisiwe nezinto ezinobisi
Ukungezwani komzimba nenhlanzi
Ukungezwani komzimba nentongomane
Ukungezwani komzimba nokudla kohlobo lwe-Shellfish
Umuntu ongakudli ukudla okwenziwe ngemikhiqizo yezilwane
Umuntu odla imifino kuphela
Umuntu ongayidli inyama kodwa odla inhlanzi
Kuze kufike ezivakashini ezingu-8 zeminyaka engu-5 kuya phezulu zingeza. Abazali bangaletha futhi izingane ezingaphansi kweminyaka engu-2 ubudala.5 Kusesivakashini ngasinye ukuqonda izithako ezisetshenziswayo futhi siphawule kumbungazi noma yikuphi…
imibiko engu- 215